Manjakaray : lasan’ny jiolahy ny vola 7 tapitrisa ariary - Informations et Actualités sur Madagascar
Société Manjakaray : lasan’ny jiolahy ny vola 7 tapitrisa ariary
Manjakaray : lasan’ny jiolahy ny vola 7 tapitrisa ariary
by Alpha world on 06 h 38 in Société
Na dia eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro ny filaminana amin’ny fametrahana paositry ny polisy mandehandeha, izay miara-miasa amin’ny fokonolona, dia tsy mahasakana ny asan-jiolahy izany. Tompon’ny trano fivarotana iray eto Antananarivo, mipetraka eny Manjakaray, indray no lasibatry ny andian-jiolahy nitondra basy, ny alin’ny alatsinainy hifoha talata. Niditra an-keriny tao amin’ity
trano ity izy ireo. Mpivady no novantanin’ireo jiolahy. Taitra tampoka ilay renim-pianakaviana ka niantso vonjeo avy hatrany. Tsy nihambahamba nitifitra azy ny iray tamin’ireo jiolahy nanao saron-tava. Voa teo amin’ny sorony izy ary torana tsy nahatsiaro tena raha ny fanazavan’ny vadiny. Nandrahoana ilay raim-pianakaviana ireo jiolahy mba hamoaka ny vola ka voaroba tamin’izany ny 7 tapitrisa ariary. Rehefa lasa moa ireo jiolahy vao niantso mpitandro ny filaminana ny tompon-trano. Tsy mbola fantatra kosa, izay tompon’antoka amin’izao fandrobana sy fandratrana izao. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy kosa ilay renim-pianakaviana ka tsy misy ahina ny ainy.
By Alpha world at 06 h 38